L. Ron Hubbard - Sword Cross sy Crown
HomeMpampianatra sandokaL. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard - mpanorina ny siansa
Lafayette Ronald Hubbard (L. Ron Hubbard) dia teraka tamin'ny 13 martsa 1911 tao Tilden, Nebraska. Tamin'ny taona 1930 sy 1940 dia lasa mpanoratra tantara foronina malaza izy. Nanambara ampahibemaso izy tamin'ny fivoriambe noforonina… 'raha tena te hahazo vola mitentina tapitrisa ny lehilahy, ny fomba tsara indrindra dia ny manomboka ny fivavahany. Amin'ny farany, izy dia ho lasa mpanorina ny fivavahan'ny Scientology. Tamin'ny 1950, namoaka ny boky izy Dianetika: Siansa maoderina momba ny fahasalamana ara-tsaina. Nampiditra ny Church of Scientology of California izy tamin'ny 1954.
Hubbard dia nalaza noho ny fanalehibeazana sy ny lainga nataony. Nolazainy tamin'ny olona fa any Azia izy, rehefa tena mianatra any amin'ny lise any Amerika. Nilaza izy fa naratra, naratra, jamba ary nanonona maty indroa tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Tsy nisy nitranga izany. Nilaza izy fa nahazo fampianarana ambony izay mbola tsy azony. Ny tenany dia fizika fizika nokleary no nanondroany ny tenany, fa tsy nahomby ny kilasy sokajy misy azy amin'ny fizika. Nahazo mari-pahaizana avy amin'ny Kolejy Columbian, saingy mbola tsy voamarina mihitsy ity mari-pahaizana ity.
Hubbard dia bigamista, nanambady ny vadiny faharoa nefa mbola nanambady ny vadiny voalohany. Izy dia nampangaina ho vadin'ny vadiny faharoa momba ny daroka sy ny fitsikerana. Nalaina an-keriny ny zanany izy ary nandositra tany Kiobà, ary nanoro hevitra ny vadiny hamono tena. Nihaona taminy izy rehefa tafiditra tamin'ny vondrona goavambe Pasadena notarihan'i Jack Parsons. Jack Parsons dia mpanara-dia an'i Alister Crowley, izay mpanafika maheryin'i Satana, mpamosavy ary mpanao majika mainty.
Rehefa manoratra ny bokiny Dianetics, Nilaza i Hubbard fa nampiasa ireto fitaovana manaraka ireto izy: ny lehilahy fanafody ny olona Goldi manchuria, ny shamans avy any North Borneo, ny lehilahy fanafody Sioux, ny kultons isan-karazany any Los Angeles, ary ny psikolojia maoderina. (Martin 352-355) Nilaza i Hubbard fa nanana anjely mpiambina tsara tarehy volo sy elatra mena nantsoiny hoe 'ny Emperora' izy. Nambarany fa nitari-dalana azy tamin'ny fiainana izy ary namonjy azy imbetsaka (Miller 153).
Hubbard dia nilaza tamin'ny olona fa nahazo medaly roa amby roapolo izy tamin'ny fotoana niasany tany amin'ny tafika; na izany aza, vao nahazo medaly tsy tapaka izy efatra (Miller 144). Nalaza noho izy naha-mpanoratra, ary mampiahiahy ny olona rehetra manodidina azy. Narary izy ary niahiahy fa nanaraka azy ny CIA (Miller 216). Tamin'ny 1951, ny New York Board of Medical Examiners dia nanangana fandaharana hanohitra azy noho ny fampianarana fanafody tsy misy fahazoan-dàlana (Miller 226).
Hubbard dia namorona cosmology izay nilaza fa ny tena tena olona dia tsy mety maty, manam-pahaizana ary manam-pahefana nantsoina hoe 'thetan', izay efa nisy talohan'ny fiandohan'ny fotoana, ary naka sy nanary vatana an-tapitrisany maro tapitrisa tapitrisa taona (Miller 214). Mitovitovy amin'ny kolika na sekta hafa; Ny siansa dia manolotra famonjena amin'ny alàlan'ny fahalalàna goavambe na fahalalana miafina. I Hubbard tenany mihitsy no nanapaka siantifika, ary nilaza izy fa hanana monopole amin'ny loharanom-pahalalana miafina (Miller 269). Ho an'ny mpahay siansa, Hubbard no 'mpanoratra ambony indrindra eran-tany, mpanabe, mpikaroka, mpikaroka, mpanao asa soa ary filozofa.' Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia mahatakatra tsara fa lehilahy nifandainga izy ary nanararaotra olona maro (Rhodes 154).
Martin, Walter. Ny Fanjakan'ny Cazes. Minneapolis: Trano Bethany, 2003.
Russell, Miller, Russell. Mesia Miatrika Bare. London: Sphere Books Limited, 1987
Rhodes, Ron. Ny fanamby ho an'ny kolontsaina sy fivavahana vaovao. Grand Rapids: Zondervan, 2001.